FX-Consultant – Indlela yabasebenzi kwi-Financial Markets
1. A indlela norhwebelwano kwi Markets emali
2. Lolonga: indlela Yenza Kuqala utshintsho lwakho hit
3. Yintoni wokuphindaphinda?
4. Yintoni Thatha Profit?
5. Yintoni Misa Loss?
6. uvavanyo Kubalulekile wachaza (I-oyile endala)
7. Uhlalutyo Kubalulekile ichazwa (apile)
8. Uhlalutyo technical: isingeniso
9. 3 Izikhokelo legolide ukuthenga nokuthengisa
10. Kutheni abarhwebi ingcali Sebenzisa Libertex mobile?
Abantu abaninzi masithi kufuneka ukuba ube lilifa yobungcali eyimali okanye ezixhonti million omnye alternate ngaphakathi yentengiso yezoqoqosho, kunjalo, into ngokwenyani asiyoyenene.
Iimfumba abantu banike imali angaphandle yonke imihla kodwa eliphezulu ungawuqwalaseli ukuba yintoni na ngokwenyani ngokwenza.
Ndiqinisekile bananise forex ngaphambi kokuya kwi holiday, mhlawumbi kwi-moya nge njengexhobongo currency sorhwebo. ubuya uniklezele ethile imali forex enye ezifunyenwe ngemali kwezinye. Yintoni bafumana umva esitshintsha usekwe phezu ixabiso woguqulo ngexesha.
Makhe silindele ukuba ngexesha elinye njengoko sikwiiholide, kubekho iindaba ukuba imali ngqesho ngaphakathi kwe US ​​sasehle kunye steyitsi intlawulo greenback aye anda ngo ezintlanu%. ngexesha Nabuya zasekhaya, uguqule Melika iidola ephantsi umva imali yakho ekufutshane amazwe wabona wenza ukuba 5% imali.
Yini wadlula off? Ngokwamanani kulula ukuba wenze imisebenzi: i zaseprayimari ngelixa wena uthenge US greenbacks, wesibini xa enathengisa ngabo benza 5% inzuzo.
abathengi Ingcaphephe wenze emisebenzini ezifanayo, kodwa, bakhethe ekuthatheni kummandla kwindawo yokuthengisa exchange angaphandle kwi-moya, ukuba kwenzeke ngokusebenzisa lula ukusebenzisa platform Libertex online, kwi cellphone zabo cell, njengezingxobo kunye yekhompyutha. abatyali isebe ukufumana iindlela ukulindela uhamba ixabiso, endleleni ukuba bafumane imali phezu kwesiseko rhoqo.
Makhe sibone kunye indlela unemali ngokusebenzisa ukuthenga nokuthengisa kwiimarike zemali.
Bonke kusenokufuneka ukuba imizuzu emihlanu it slow, i akhawunti demo nge $5,000, ngambini imali angaphandle, EUR / USD kunye USD / CHF.
Le ngababini ukwenza imizekelo efanelekileyo njengoko kuchaphulo olu zabo enye ziyahluka impela njalo, kwaye ungenza inzuzo kubo kuphela 5 ukuba 30 imizuzu. Akuyi kuya kufuneka alinde ukubuyela ukusuka uhambo.
avumele ukuba Qalisa!
1. Khetha EUR / USD kuluhlu asethi kwaye ivule enye lokuthenga. ukuba xa imali $500 nge yakha ngekhulu enje.
2. Vula enye urhwebo ne USD / CHF njengento yexabiso, sebenzisa lingabali efana kunye umyinge wotyalo-mali efana.
Kwabelwane zonke, imali ngabasebenzi intando Charge encinane (ngaphakathi kwindlela ngokulinganayo ukuba iziko zemali ukuze intengo Imali ukuba forex). Mhlawumbi ubone eli ixabiso kwi window exchange. kodwa ngokwahlukileyo kwiziko zemali, ikhomishini umthengisi mininzi nciphisa.
3. Kamsinya nje vula zombini misebenzi, bakhangele phambili imizuzu emihlanu njengokuba ufuna isiphelo japan imisebenzi yakho '.
Ne. Nangona inzuzo shintsho lokuqala idlula ilahleko lorhwebo enye ngomzuzwana, okanye imisebenzi ngalinye kwi imali, uvale zombini ukutshixa ingeniso yakho.
Xa sele uvule zombini misebenzi njengoko kuchaziwe apha kwaye kunjalo asikwazi ukubona nayiphi na ingeniso, ungaxhalabi. Ukuba yemarike uzolile, uya kubona enye, ngoko kumka kuyo ukuvula ixesha.
Kwimeko yethu, ingeniso USD / CHF udlula EUR / ilahleko USD. ukuvumela kufuphi zombini misebenzi ukufumana ingeniso kwi-akhawunti.
Siye nje esuke yengeniso USD / CHF ngemizuzu ezithile kuphela, kwaye usebenzisa uvavanyo nangayiphi na indlela.
Yakha yenye gear engundoqo Libertex. It ikuvumela kuwe ekukhuleni umthamo inzuzo exchange wakho.
wenza njani kaMnu? Yinto kakhulu elula.
Yemvume balindele uthenga EUR / USD, ubungakanani yakho mali $50, kunye ezininzi yakho enye. Ukuba intlawulo ithe qatha 10%, ingeniso yakho kungaba $ abahlanu ($50 x 10%).
Kodwa ukuba njengoko kuchasene nye kuwe ucacise 20 njengoko yakha imali yakho iya kuvela ku $1,000 ($50× 20).
into Njengoko ubona, imali yakho uye waphakanyiselwa nge 20, kwaye yindlela imisebenzi yakha.
Yiloo nto kanye uqina kwe nemoto: ngakumbi ukuba kude, ngokukhawuleza uya khona. kunjalo, ngesantya esiphezulu kuzisa nayo ithuba enkulu. Le nto ngalinye amandla isithuthi intshukumisa ukhetha isantya okulungileyo bona ngokuxhomekeke Revel yabo, imeko floor ezitalato kunye neendwendwe site ikhowudi.
Ngokuba abarhwebi makhwelo, sincoma nokusetyenziswa yakha encinci, silingana 1, leyo siphephe iingozi xa izenzo emakethe kuni.
Njengoko uthenge izakhono kunye namava, kwakhona kwandisa yakha yakho.
Thatha imali i oda elindile oluvalela-in ngokuzenzekelayo ingeniso kumthengisi xa.
ngexesha ukusebenzisa Thatha Iholo:
• Kukunika ithuba cinga kufuneka uye kude urhwebo ukuvula i iiyure ezimbalwa kwaye ayikwazi ngokumana esweni intshukumo isigxina. Kule meko, wena ngokuqinisekileyo indawo umyalelo Thatha ingeniso kwaye uphumle siqinisekile xa wena thweni ukuba bagcine imovie.
• Makhe bakholelwa ukuba ngexesha elinye njengoko ubukele le movie lihamba umrhumo lempahla ngendlela entle. Umyalelo Thatha nemivuzo ibekwe ngaphambili aya lock-kwintlutha yakho nge zoomatshini eseleyo umsebenzi wakho, kanye impahla efikelela intlawulo entle, ukuze wenze maholo njengokuba ubukela umboniso wakho.
nanku umzekelo we indlela yendawo order Thatha ingeniso:
• Wena uvula EUR / USD utshintsho Wothenga kwi 1.0620
• Usebenzisa $500 nge esikhulu 100
• khangela itshati ye izinga le asset eyona iphezulu yangoku. Kwimeko yethu, nto 1.0745.
• lakho ukuze Ziphe imivuzo kufuneka ukuba ibekwe kanye ngaphantsi izinga eliphezulu, cishe 1.0725
• Ukubeka umyalelo Thatha ngengeniso le quote, uvule kuqala umsebenzi kunye asethi uze uye ku misebenzi My
• Khetha exchange EUR / USD wena kuvuleka kwaye nqakraza kuyo
• Khetha Caphula ukusuka kwisikhululo Ilahleko / Thatha menu Iholo
• Xa isifundo Thatha kwinzuzo, ubeke imali yakho oyithandayo, 1.0725 kwimeko yethu, kwaye nqakraza ku shop
Ngoku wena akuyi kuncitshiswa nto yakuzixhalisa malunga uhlengahlengiso umrhumo lempahla bengayi kufuneka achithe iiyure umkhondo tshati zakho. Lo gama injongo yakho Inqanaba ingeniso iye yafikelela, trade yakho kufuphi ngokuzenzekelayo, kunye nengeniso yakho kude ngqo zidipozithwe kwi-akhawunti yakho yorhwebo.
Stop-Ilahleko oda elindile esetyenziswa yi nabarhwebi ukunciphisa imingcipheko.
Xa kuhlalutywa yemarike, abathengi ingenza kwakhona nombono intshukumo ixabiso asethi zizenzele ilahleko. Ukunciphisa ubungakanani ngelahleko enokubakho, kumthengisi ungacwangcisa imida ethile ithuba ngokuyintloko isekelwe phezu kwale ndaba emakethe.
Oku uyakukhusela kokuba ukubonisa charts ngamathuba elide ixesha kwaye nizihlubile nje iinkcukacha ngokweemvakalelo ngexesha ekwenzeni izigqibo ezingundoqo zorhwebo. Umyalelo ukunqanda-Ilahleko nayo ikuvumela ukuba ushiye isikrini sakho entloko uze ubukele imovie bayazi-indlela ubuninzi yakho usongo umaka.
Kanye apha ngumzekelo indlela etindhawini umyalelo ukunqanda-Ilahleko:
• Wena uvula EUR / USD utshintsho ithengwe 1.0605
• Wena wenze utyalo-mali $500 nge yakha ikhulu
• Ukubeka umyalelo Thintela-Ilahleko ngokuchanekileyo, jonga kwi itshathi ye isigxina ukuhla yangoku eliphezulu le lempahla. fumana imali encinci.
• lakho oda-Ilahleko kufuneka ibekwe nje phantsi izinga encinci, ngezithuba 1.0580
• Ukuze Ndawo umyalelo stop-Ilahleko ngenxa yale quote, uvule kuqala umsebenzi kunye asethi emva koko tyelela misebenzi My
• Khetha urhwebo EUR / USD wena kuvuleka kwaye nqakraza kuyo
• Khetha Nte ukusuka ukuthintela Ilahleko / Thatha menu Iholo
• Ngaphakathi isihloko aphephe Ilahleko, abeke iindleko yakho oyithandayo, 1.0580 kwimeko yethu, kwaye nqakraza ku ivenkile
Ngoku musa ukuba ukoyika uhlengahlengiso amanani lempahla bengayi kufuneka achithe iiyure umkhondo tshati zakho. iingozi zakho lubalwe kwaye wanyamekela.
Analysis Fundamental Explained
Imirhumo wokulwela uyayiguqulela rhoqo, ukuba baphenjelelwa ngoncedo ukhetho OPEC, ungquzulwano phakathi East, wenyuse lemveliso e Iran nenala izinto ezahlukeneyo.
Ngokomzekelo, masithabathe inkcazelo epapashwe ngoJanuwari 2016: Russia kunye OPEC ukunciphisa Phantsi Oli yokuvelisa ekrwada ukuba aphephe i ukukhuthaza-off.
ngoFebruwari 16, 2016, OPEC naseRussia waphumelela okunene iimveliso neGauteng inhlamba.
ngoFebruwari 17, intlawulo-oli ekrwada lasuka $32.29 ukuba $34.31 (6.Ntathu%). Ngokuba elandelayo 20 iintsuku, intlawulo egcinwe ekhula, yaye ngoMatshi 7, sifika $ 40.seventy ezintandathu, ahlabe lwaphezulu 26.2%.
Ukwahlukana iindaba kuquka izaziso zibalulekile kunye nezivumelwano zibonisa up ngosuku ngalunye. kunokwenzeka wati kubo kumabonwakude okanye on-line. ukuze kwabonakala iziganeko ezifana wemali nje izaziso zorhwebo; nge ukuzifunda, uyakwazi ukuchaza ukuba izinga baya kuhlatywa phezulu okanye ukuwa.
Ukwenza imisebenzi ngale ndlela kudla ngokubizwa ngokuba uvavanyo esisiseko.
A ithuba elide kulindeleke, ezifana kukhululwe iPhone entsha kraca, iPad, okanye MacBook, angakwazi Imigca emide injongo kwiivenkile. le isidingo, ekujikeni, ukuze isebe ube nefuthe enotyhalo usinga phezulu ngaphakathi isigxina esitokisini Apple.
Oku kunika ithuba lokuzifumanela elimangalisayo nayiphi Umthengisi a hit.
Masithathe umzekelo. Ngo September 7, 2016, i iPhone entsha 7 esitshintsha kubonelelwa kuluntu jikelele.
Usuku ngokulinganayo kakhulu, izabelo Apple wavuka $107 ku $ a anamanci asixhenxe anantlanu,.
Lo mcimbi esitshintsha ifakiwe kuzo zonke ezikumaziko ewebhu ulwazi, ngoko sonke (okunokwenzeka, kuquka nawe) akwazi ukuba kuthathwe ngayo.
iinxalenye ezinjalo iinkcukacha echaphazela abenzi edume, iimveliso kunye neenkonzo (facebook, Microsoft, Uphando, Tesla, kwaye nangokunjalo.) zimiselwe ngosuku ngalunye, on-line kunye kumabona kude. Nganye kwezi zinto luphawu yorhwebo akuvumela ukuba wenze ingeniso izinga lokuqala.
Imisebenzi ikakhulu ngokusekelwe iindaba kunye izihlandlo owaziwa ngokuba uhlalutyo esisiseko, enye yezona ndlela ethandwa ukuthenga nokuthengisa.
Ukuthatha ukuthenga abanolwazi nokuthengisa ukhetho, eziquka ukuba athenge okanye athengise impahla, kufuneka aphande iindleko yemarike. On intuthuzelo yenu, ezo amanani libonwa ngaphakathi uhlobo ngeetshathi.
Xa nenza i itshathi lobushushu emoyeni ku 2 iingongoma ngeshumi, ukuze ubone amathuba nje ngeli xesha lobushushu ibe namandla, i.e. ngelixa kuyo lenyuka kuluhlu ofanelekileyo phakathi amaxesha onyaka koko linyuke kakhulu ehlotyeni kwaye zancitshiswa ebusika.
Kwenzeka ntoni ngaphakathi ngaphaya uya lingaveli ikamva - ingqiqo sibalulekile kumaqondo obushushu njengoko ku kwiimarike zoqoqosho. Oko enyanisweni undoqo yovavanyo technical.
Yemvume Masithathe enye iiseyile kakhulu ethandwa uvavanyo tech, inkxaso Resistance, njengomzekelo.
Xa ixabiso ithe qatha waza ngesiquphe umva endleleni, ngokungathi ibetha ludonga, eli xesha ukukhuthaza.
Xa umlinganiselo owayo koko bonke ngaxeshanye yagqampa yaya phezulu, njengebhola yagqampa yaya phezulu off phantsi, oko isignali ebalaseleyo ukuya elide.
ukusebenzisa zethu platform trading, wena lalingakwazi imigca engaphezulu kwi itshati ukubetha phezu nezimo, okanye asebenzise neziphawuli kukunika uthenga nokukhuthaza imiyalezo.
Ukutshintsha eyiyo ngokuphepha, nje mabalandele ezo zikhokelo ezintathu Golden!
Ihlale sebenzisa fashion ukuthenga nokuthengisa. ukuthatha ingqalelo ukubiza: Le fashion umhlobo wakho! xa ubona intlawulo nje ihamba usenza into eyakhayo, lokuthengisa le ndlela. Kusoloko lula ukuba izakusebenza umoya!
Vumela inzuzo yakho ikhule, njengokuba proscribing ilahleko yakho. imali yakho sidinga ukuba idlule ilahleko yakho, nto leyo elula! yinto efanayo kude kuyo ubukho real: imali engaphezulu, imali ngaphantsi kakhulu. usongo wakho / indumiso ratio kufuneka ukuba ube 1:2... okanye ngaphezulu!
ilungelo nalu 1/3 mthetho: ukulawula imali yakho. ngoxa ekuqaleni nje ukuba ukutshintsha, usebenzisa izixa-mali kunye multipliers, ngoko ukuze afake ngaphezu 2% of eseleyo kwi-akhawunti yakho. le ndlela, enye ongaphumelelanga ingaba zitshiphu itikiti ixabiso ibhasi.
In intuthuzelo yenu, siye savela umthengisi Tracker, isixhobo ekhoyo kakhulu ukunceda unokulandela le migaqo ngelixa wena ngokwenza amanyathelo akho yokuqala Trader.
Yiya kwi ukubukela imiyalelo zethu ukufumana iindlela ukurhweba ezilandelayo loo mithetho!
Ukuze lokuthengisa ngempumelelo, ofuna ukuyiphendla kwiimalike kakuhle kakhulu kwaye sisabele ngokukhawuleza kwi izaziso ke ukuba uthumela indlela yakho. I-terminal Libertex intanethi kuya kunceda wena kunye novavanyo, njengokuba kwiseli Libertex App uqinisekisa ukuba uza ningashiyeleli naliphi na ithuba urhwebo. Ngaphezu asibhozo%-mali ngempumelelo sebenzisa ngamnye Libertex yesiphelo-intanethi kunye Libertex app mobile.
Zama ukuba nomfanekiso-ngqondweni imeko elandelayo imicimbi: wena eyiyo baleka uhlalutyo yakho oyongayo ngaphakathi Libertex umnatha terminal kwaye sizimisele ukuba uvule umsebenzi, kodwa ke definately kwafuneka emke itafile yakho banikwa ezibanjiswa jam iindwendwe, okanye mhlawumbi waya ukubona imovie okanye waya kutyelela kwintanga. into Ngokusebenzisa usebenzisa i Libertex app yeselula ukuba usabele ngokukhawuleza kuzo zonke uhamba izinga ngexesha elifanayo ukuba indlela elikude elide kwi desktop yakho, i.e. unga alternate kwi the go, uPhuculo lwalo Naliphi ixesha, kuphi. Nge Libertex app mobile, ungahlela izikhundla evulekileyo, kwakunye evulekileyo imisebenzi emitsha esweni iziphumo zakho ngexesha real. Loo nto ngqo luncedo xa imeko yemarike jikelele senihlambulukile kuwe.
Xa ufuna ukuchitha ixesha kucazululo, ngokwenza ukukhetha ezingundoqo, i Libertex terminal net sisisombululo egqibeleleyo ngokwenene. Nale iqonga ukuthenga nokuthengisa, kokuba banikwa yonke into ofuna ukuba banikeze: ukulinganiswa asethi, izixhobo analysis technical, kunye nolwazi nokuphula. Ngokufanayo, net-based yethu ngokupheleleyo iqonga evumela ukuba kuzuze ukuqonda ncomo iingcali zethu kunye neengcebiso phambi uvula exchange.
Download app yethu cellular thru i Andriod Market okanye nge AppStore, kwaye usebenzise iqonga lethu lewebhu nge browser yakho oyithandayo.